Niteraka Tahotra Isian’ny Sivana An-tserasera ao Bhutan Ny Fitoriana Lahatsoratra Iray Tao Amin’ny Facebook · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2016 5:09 GMT
Tamin'ny antso an-tserasera, nanazava ny fikasan'i Phuntsho haka ny tranon'ny fianakaviany ny Dr. Sacha Wangmo rehefa tsy afaka namerin-trosa 7 hetsy Nu tamin'i Phuntsho ny efa tsy ao amin'ny fianakaviana intsony. Nilaza i Wangmo fa nanao taratasy hosoka i Phuntsho mba hampisehoana fa nivarotra ny tranony izy ireo handovana indray ny trosa any aminy, zavatra izay nolazain'ny fianakaviana fa tsy neken'izy ireo .Nilaza ihany koa ny antontan-taratasy fa niakatra ho 3 tapitrisa Nu ny trosan'izy ireo izay 0,7 tapitrisa Nu teo aloha.
Amin'izao fotoana izao, namoaka ny fanangonan-tsoniany i Wangmo. Nolazainy ny tantaran'ny fianakaviany , ary niampanga an'i Phuntsho ho nanararao-pahefana izy tamin'ny famadihana ny didim-pitsarana ho amin'ny tombontsoany. Nisarika ny sain'ny maro an-tserasera ny fanangonan-tsonia , ary vao maika nihamaro kokoa izany rehefa niakatra Fitsarana Tampony tao Bhutan ny raharaha.
Nahatonga an'i Phuntsho hamaly izany. Napetrany haingana ny fitoriana fanalam-baraka azy izay mitory an'i Wangmo sy Zam, ilay mpanao gazety amin'ny fahitalavitra iray teo aloha sady sakaizan'i Humphrey ao amin'ny Oniversiten'i Arizona ao Etazonia. Milaza izy fa nahatonga “fahavoazana tsy azo harenina” tamin'ny lazany ny lahatsoratra, satria nahita izany avokoa ny olona maro ao Bhutan sy manerana izao tontolo izao. Nitaky onitra 2,59 tapitrisa Nu (38,500 $ Amerikana) ilay mpandraharaha raha mbola tsy vita ny fitsarana:
Nilaza tamin'ny fitsarana i Namgay Zam fa tsy nandika lalàna izy ary ny lalam-panorenana nanome azy fahalalahana hanaparitaka vaovao.
Nanaraka akaiky ny raharaha ireo mpiseran'ny media sosialy ao Bhutan ary naneho ny heviny momba io raharaha io. Nivoaka noho ny tantara niseho tao amin'ny Facebook ny fiampangana vaovao ho fanaovana hosoka sy ny fandikana lalàna nataon'i Puntsho
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Phuntsho Dorji hoe:
Nilaza i Wangchuk Dorji fa tsy ara-drariny ny fiampangana an'i Namgay ho manao fanalam-baraka ;
Maro ireo mpisera no naneho hevitra momba ny fampiasana ny lalànan'ny fanalam-baraka ho fitaovana fampanginana. Nanoratra i Dargo Tashi hoe:
Nitaraina momba ny tsy fahampian'ny valinteny matanjaka avy amin'ny fitsarana momba ny fanoloran'i Phuntsho ny antontan-taratasy sandoka i Pema Wangmo:
Nilaza ny fanadihadiana avy amin'ny tranonkalam-baovao Azia-Pasifika amin'ny teny anglisy The Diplomat fa ny tao anivon'ny adihevitra dia ny fomba ikarakarana manokana ireo olona ambony ao Bhutan sy ireo havany akaiky miohatra amin'ny olom-pirenena tsotra.
Nametraka ny lanjany teo amin'ny raharaha ny Praiminisitra Tshering Tobgay tamin'ny filazana fa “ho raharaha manan-tantara iray izay tokony hoheverintsika tsara” ity raharaha fanalam-baraka ity. Nilaza izy fa:
Nilaza ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao sy ny Serasera, DN Dhungyel fa hampiditra tsy ho ela ny politika famerana ny zavatra azo zaraina ao amin'ny media sosialy ireo mpanao lalàna. Nandritra izany fotoana izany, nandefa fanangonan-tsonia vaovao misolovava ny raharahan'i Sacha ireo mpanohana azy.